Inona no manokana momba ny SEO amin'ny orinasa IT?
Ho an'ny olona sasany, dia mety ho fanontaniana mahabe resaka - amin'ny fampiasana fifamoivoizana findramam-bola, na mitondra azy mivantana mankany amin'ny tranonkala? Raha ny amiko, indraindray mifandray amin'ny fampiroboroboana rindrambaiko, ny fikarakarana SEO ho an'ny orinasa IT dia tsy resaka ny safidy. Ny fitaterana organika matetika dia mitondra ny taha ambony indrindra amin'ny fiovam-po, ka mahatonga ny fitarihana tsara indrindra, ary tsy mitondra vola be. Vetivety ihany ny fatrana mangatsiaka mba hitsangana organika indray mandeha ary ho an'ny rehetra - yf-wood. Araka ny fanadihadiana natao vao haingana, ny tombatombana mihoatra ny 90% amin'ireo klioketsa rehetra ao amin'ny Google dia nalaina tamin'ny valin'ny fikarohana biolojika, raha toa kosa ny fikarohana karohina dia nahatonga fotsiny zavatra maharikoriko momba ny 7%. Raha ny marina, ny SEO ho an'ny orinasa IT dia manana fifandraisana betsaka kokoa amin'ny hevitra tsotra, fa tsy zavatra miavaka. Andao hiezaka hitsapa azy tsikelikely.
Amin'izao fotoana izao dia misy safidy tsy hita isa amin'ny safidim-pitondràna avo lenta amin'ny tranonkala amin'ny resaka lohahevitra. Amin'ny ankapobeny, miresaka momba ny fandraharahana momba ny SEO izahay, ohatra hoe tranokala. Raha ny tena marina dia sarotra be ny indostria itondrantsika. Ankoatra ny orinasa SEO ho an'ny orinasa IT dia mety manana ohatra hafa koa isika, manangona tsena marika izay azontsika eritreretina. Na dia izany aza, na izany aza, ny soso-kevitra ankapobeny dia mbola hitoetra ho mitovy foana. Ny zavatra dia avy amin'ny fomba fijerin'ny SEO sy ny Google Search engine mihitsy, dia misy ny singa roa fototry ny sangan'asan'ny pejy:
Ny votoatiny avo lenta manan-danja amin'ny teny fanalahidy manan-danja sy fehezanteny manan-danja, izay manome lanja betsaka amin'ny ny mpamaky rehetra;
Backlinks organika mampifandray ny pejy amin'ny tranonkala hafa. Fifandraisana eo amin'ny backlinks kalitao sy ny isa, mba ho marina.
Hatramin'ny ela dia nisy ny fanombatombanana izay manararaotra kely amin'ny dika tenenin'ny sokajy (ao anatin'ny lohahevitra ankapobeny) mety ho ampy tsara fotsiny mba hahatsapana tsara ny tranokalanao. Amin'izany fomba izany, mametraka ny bikabikam-piravoravoana sahaza ny teny fanalahidy sy ny adiresy azy ireo amin'ny fahefana matanjaka, nefa mety tsy misy ifandraisany amin'ny mpivady tokana tokana mitovy amin'ny teny fanalahidy mety ho mora entina angamba angamba ny tranonkala vintana rehetra eo an-tampon'ny fikarohana Google. Raha manao izany isika, dia afaka manova zavatra ara-bakiteny ara-bakiteny isika - manao SEO ho an'ny orinasa IT, na ohatra mpivarotra sakafo sasany. Ny fepetra tokana, ary noho izany, ny fahasamihafan'ny fototra, dia mitovy ihany - manao ampondra iray mba hanamboatra ilay "logic" maoderina taloha.
Saingy nandalo ireo fotoana ireo, ary ankehitriny dia mihalalina kokoa ny algorithm an'i Google. Amin'ny teny tsotra, ny milina fikarohana dia afaka mametraka ny vontoatin-tranonkala rehetra amin'ny alàlan'ny fanombanana henjana indrindra, amin'ny fampiasana safidy maherin'ny 200 mba hahatongavana amin'ny fanapaha-keviny farany. Na iza na iza manambaka, na manararaotra na na dia ny rafitra manipulative tsara indrindra aza dia tsy azo ampiharina intsony. Noho izany, ny kilalao tsara tarehy amin'izao fotoana izao dia midika fa tsy manana afa-tsy ny votoatin'ny kalitaon'ny olona ihany, ary koa ireo teknika be loatra mba hahatonga ilay tranonkala ho an'ny motera fikarohana. Mba hahazoana ny fahatakaran-javatra fototra hafa, ankoatra ny votoatiny sy ny rohy, dia manoro hevitra aho hamaky ny top 10 fototry ny SEO ankehitriny. Mandehana mandeha fotsiny, lohahevitra mafana.